Home Home muxuu ku saabsan yahay safarka muuse Biixi ee Magaalada Dubai
Wararka aan ka heleyno Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in Madaxweynaha maamulka Somaliland Maanta uu ku wajahan yahay Magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta.
Socdaalka Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Magaalada Dubai ayaa waxaa ku wehlinaya xubno ka tirsan maamulkiisa,isla markaana waxaa la filayaan in Saacadaha soo socda uu ka duulo Garoonka diyaaradaha Magaalada Hargeysa.
Madaxweynaha Somaliland ayaa markii uu tego Dalka Imaaraadka waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa Madaxda sare ee dilkaasi iyo xubno ka tirsan Madaxda Shirkadda DP World ee ku sugan Dubai.
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in Muuse Biixi inta uu ku sugan halkaasi Madaxda Shirkadda DP World uu kala hadli doono sidii loo dardar gelin lahaa howlasha shaqo ee DP World ka wado deegaanada Somaliland iyo balaarinta loogu sameynayo Dekadda wayn ee Magaaladda Berbera.
Waa Safarkii labaad ee Madaxweynaha Somaliland uu ku tegayo inta uu xilka haayo Magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta.